माया त कति लाग्छ लाग्छ, तर पनि अब हामी सँगै जिन्दगी बिताउन सक्ने अवस्थामै रहेनौं ! – aajnepal
HomeNewsमाया त कति लाग्छ लाग्छ, तर पनि अब हामी सँगै जिन्दगी बिताउन सक्ने अवस्थामै रहेनौं !
February 1, 2019 aajnepal News 0
‘तिमीले महिलाको मात्र हैन, पुरुषका बारेमा पनि लेखेको देख्छु, आज मलाई तिम्रो सहयोग चाहिएको छ, मिल्छ भने आजै भेटाैं न ।’झण्डै एकवर्षसम्म भेट हुन नपाएको एकजना पत्रकार साथीले अस्ति फोन गरेर अत्तालिँदै यसो भने । मैले उनलाई नाई भन्न सकिनँ ।साझ ५ बजे लभिव मलको गेटकै आडमा भएको क्याफेमा हामी बस्याैं ।साथीले बिस्तारै हेल्मेट र चस्मा खोल्यो । महिनांै नसुतेको जस्तो फुङ्ग परेको अनुहार । चुस्स परेको, फुलेको दाह्री ।तिमी त कस्तो बुढो पो भएछौ है । ठट्टा गर्दै मैले भनें । मैले त्यति भन्नासाथ उनका आँखा रसाए । म मौन हुन पुगे । उनले एउटा अमेरिकानो मगाए मैले क्यापाचिनो ।उम.. भन त के तनाव भो तिमीलाई ? मैले सोधें ।त्यही त हो नि यार, मेरी श्रीमतीले रातदिन म तँलाई डिभोर्स दिन्छु भन्छे । हाम्रो झगडा यतिसम्म भैसक्यो कि अब त म बोल्नासाथ उसले डाडुपन्यु जे पायो त्यसले हिर्काउँछे । उसले घाँटीको दागहरु देखाउँदै भन्यो, यी हेर उसले कोपारेको ।उसका आँखाबाट भल्किएको आँसुको बेगलाई मेरा शब्दहरुले रोक्न सकेनन् । मैले सोधें- तिमी के चाहान्छौ त ?उसले भन्यो- मैले उसलाई स्कुल पढ्दादेखि मन पराएर बिहे गरेको हुँ ।
हिजो जति माया थियो, त्यसमा कुनै कमी छैन । म उलिाई छाडेर बस्न सक्दिनँ ।तिमीहरुवीच के कुरामा विवाद छ त ? मैले प्रश्न गरें ।लामो श्वास तान्दै उसले आफ्नो कुरा सुरु गर्‍यो-बिहे गर्दा म २७ वर्षको थिएँ उनी २० वर्षकी । बिहे भएपछि उनी घरमै बस्थि न् । मैले उनको पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर कलेज पठाएँ ।उनलाई चिया असाध्यै मन पर्ने । बिहान पहिलो कप चिया बनाएर मैले उनलाई उठाउँथे । सँगै चिया पिएपछि हाम्रो दैनिकी सुरु हुन्थ्यो । बिहानको खाना उनी बनाउँथिन्, बेलुका मैले बनाउँथें।दि नहरु बित्दै थिए । हाम्री छोरी ८ वर्षकी भइन् । हरेक दिन बाहिर जाँदा उनले के कपडा लगाउने र मैले के लगाउने भन्ने समेत हामीले एकअर्कालाई सोध्ने गर्थ्याैं ।उनले विस्तारै दिउँसो जागिर गर्ने र साँझ कलेज जाने गर्न लागिन् । म छोरी स्कुलबाट आउँदा घर पुगिसक्थें र साँझको खाना बनाएर उनलाई कुर्थें । विस्तारै उनको बच्चा अनि मप्रतिको लगाव मैले कम महसुुस गर्न थाले ।उनी विस्तारै मसँग चिढिन थालिन् । दिउँसो अफिस टाइममा फोन गरें भने घर आएर कराउथिन् । साँझ घर आएपछि हाम्रो यस्तै सानो सानो कुरामा झगडा पर्न थाल्यो ।उनले तिमी मलाई शंका गर्छौ र त जतिबेलै फोन गर्छौ भन्थिन् ।
तर, मैले शंकाले हैन, मायाले फोन गर्थें ।विस्तारै हामीवीचको सम्वन्धमा खट्पट सुरु भयो । उनले मलाई कन्ट्रोल मन पर्दैन भन्न थालिन् । उनको व्यवहारले म चिढिन थालें । कामको शिलशिलामा उनी बाहिर जाँदा पनि विस्तारै मलाई असुरक्षित महसुस हुन था ल्यो ।हिजो पनि उनी यस्तै कुरामा रिसाइन् । झगडाले ठूलो रुप लियो । त्यसकै निसानी हो यो मेरो घाँटीको दाग । आज विहानै उनी बच्चासहित घर छाडेर हिँडिन् । अब तिमी नै भन, म के गरौं ?उनी मसँग यति कुरा गरुञ्जेलमा धेरैपटक घुँक्क घुँक्क गर्दै रोए । उनको आँशुलाई मेरो शान्त्वनाका शब्दले रोक्न सकेन । तिम्री श्रीमतीसँग म कुरा गर्छु भन्दै म उनीसँग छुटिएँ ।साँझ फेसबुकमा मैले उनकी श्रीमतीसँग कुरा गरेर भेट्न आग्रह गर्थें । भोलिपल्टै त्यही क्याफेमा हाम्रो भेट भयो ।आजभोलि फेसबुकमा अनलाइन नि देख्दिनँ, कता हराको तिमी ? मात्र के भनेकी थिएँ, उन का आँखा रसाए । के भयो ? मैले केही थाहा नपाएझै गरी सोधें ।खै के हो के यार, बिहे गरेर गल्ती गरिएछ । आफ्नो करिअरमा धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने मान्छे, घरायसी किचलोले म यता न उताकी भएँ । उनले अनुहार मलीन बनाउँदै भनिन् ।के भयो, भन न त ? मैले सोधधें ।
हेर न मेरो बुढा मलाई तिमी एकदम राम्री छ्यौ, तिमीलाई त जसले नि आँखा लगाउँछन् भन्दै फेसबुकमा कसैसँग बोल्न नि दिँदैन । बाहिर कतै एक्लै जान नि दिँदैन । उसमा भएको असुरक्षाको भावलाई मैले हटाउनै सकिनँ ।छोरीसहित आएकी उनले एक हातले आँशुपुछ्दै र अर्को हात छोरीको काँधमा राख्दै बोलेकी थिइन् । मामु रोएको देखेर छोरी समेत रुन थालिन् ।उनले रुँदै थप वयान गर्न थालिन् ।सानै थिएँ उनले मन पराउँदा । बच्चा बेलामा सधैं जन्मदिनमा क्याडबरी चक्लेट किनेर दिने उसको बानी अहिलेसम्म कुनै वर्ष छुटेको छैन ।
माया त कति लाग्छ लाग्छ, तर पनि अब हामी सँगै जिन्दगी बिताउन सक्ने अवस्थामै रहेनौं । सायद छिट्टै डिभोर्स हुन्छ होला ।मलाई उनीसँग धेरै कुरा गर्न मन थियो । तर, छोरीलाई होमवर्क गराउनु छ भन्दै उनी मसँग छुट्टइिन् ।म भने एकछिन क्याफेमै बसेर सोच्न थालें।दुबैजनाको मनमा एक अर्काप्रति यति धेरै माया छ । तर, पनि सम्बन्ध भने टुट्नै लागिसक्यो । यी दुबैजना अहिले एकअर्कासँग अलग छन् । आखिर किन होला ?केही महिनाअगाडि विदेश जादाँ मैले एकजना बहिनीसँग स्टारवक्र्समा कफी पिउँदै गर्दा सोधेकी थिएँ- के छ ज्वाइँ र छोराको खबर ? के हुनु दिदी, नेपालमा छ ठीकै होला । निधार खुम्च्याउँदै उनले भनिन् ।किन, के भयो र ? मैले सोधेंआँखाभरि आँशु पार्दै उनले भनिन्- दिदी, म ८ वर्ष भयो विदेश बसेको । म नेपालकी छोरी, त्यो भन्दैमा मैले स्वतन्त्र भएर हिँड्न र आफुखुशी लगाउन नि नपाउनु ?किन, के भयो र ? मैले फेरि सोधें ।मेरो श्रीमान मलाई सधैं कन्ट्रोलमा राख्न खोज्छन् । मैले नराम्रो काम गर्न पो हुन्न । म विवाहित मान्छे, मलाई मेरो सीमा थाहा छ । तर, बुढाले जहिल्यै शंकाको नजरले हेर्दा मन नै मरिसक्यो ।एक वर्षअगाडि विदे शमा भेटिएकी तिनै बहिनीलाई मैले हालसालै अनामनगरमा एक वकिलकोमा एक्कासी भेटें ।
उनी डभोर्सका लागि नेपाल आएकी रहिछन् । घर सिन्धुपाल्चोक । तर, उनी काठमाडौंबाटै डिभोर्स फाइल गरेर विदेश र्फकने तयारीमा रहिछन् ।उनले वकिलाई सारा कुरा सुनाइसकेपछि वकिलले उनका श्रीमानलाई फोन गरिन् र भनिन् तपाईकी श्रीमती सम्बन्ध वि च्छेदको मुद्दा दायर गर्दै हुनुहुन्छ, सकेसम्म मिलेको राम्रो । नमिल्ने भए पनि सहमतिमै सम्वन्ध विच्छेद गरे छिटो र सजिलो हुन्छ ।उताबाट जवाफ आयो- म उनीविना बस्न सक्दिनँ, त्यसैले उनलाई सम्झाएर घर पठाइदिनुस् ।ती बैनी कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने मुड बनाएर आएकी थिइन् ।
तर, उनका श्रीमान भने वकिलसँग बिन्ती बिसाउदै थिए- ‘म्याडम मेरो शरीरको नशा-नशामा छन् उनी, म उनिविना बाँच्न सक्दिनँ । छोरा मान्छे हुँ, आफ्नी श्रीमतीलाई कन्ट्रोल त गरिहाल्छु नि । रीस उठ्दा दुईचार थप्पड लगाएँ पनि होला । तर, माया धेरै छ म्याडम, म उनलाई छाड्न सक्दिनँ ।उनका श्रीमानले फोनमा गरेको गफ सुन्दा लाग्थ्यो, यो जोडीभित्र अथाह माया छ । तर, त्यो माया सम्वन्धविच्छेदको नाममा तोडिँदैछ ।वकिलले लामो श्वास तान्दै म सम्झाउने कोशिस गर्छु भनेर फोन राखिन् ।मैले फेरि बहिनी लाई सम्झाउने शैलिमा सोधें-
तपाईका बुढाले धेरै माया गर्ने रैछन् । बच्चा सानो छ, बुढाबुढी मिलेर बस्नुस् ।मेरो कुराले उनका आँखा रसाए । रुँदै भनिन्-त्यस्तो हैन नि दिदी । म विदेशमा विहानदेखि रातिसम्म काममा खटिन्छु । तर साझ थाकेर डेरामा पुग्छु, कहिले किन फोन उठाइनस्, कहिले किन यस्तो कपडा लगाको ? कहिले हिजो छुट्टकिो दिन कहाँ गाको, यस्तै यस्तै कुरामा सधैं किचकिच सुन्नुपर्छ । ८ वर्षदेखि यही किचकिच सुन्दा-सुन्दा मन नै फाटिसक्यो । माया गर्छ भन्दैमा जहिल्यै किचकिच र उसको कन्ट्रोलमै बाँच्न पनि त गाह्रो हुन्छ नि, हैन ?मसँग उनलाई दिने कुनै जवाफ भएन ।किन बिग्रन्छ सम्बन्ध ? मैले यहाँ दुईवटा जोडीका दुबैतर्फको भावनालाई समेट्नुको कारण यो हो कि श्रीमान र श्रीमतीवीच असाध्यै माया हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले सम्वन्धहरु टुट्दै गएका छन् ।माथिका यी दुबै जोडीले आफ्नो जीवनसाथीलाई माया त गर्छन् तर पनि सम्वन्ध भने तोडिए को छ ।फरक रक्त सम्वन्धको परिवारमा हुुर्किएका युवा र युवतीको विचार एउटै भने पक्कै हुँदैन । बच्चादेखिको सामाजिक पारिवारिक संरचना र हुकाईको परिवेश, आदिले गर्दा पनि दुईजनाको विचार फरक-फरक हुन्छ ।तप् फरक विचारका युवक र युवतीवीच जब विवाह हुन्छ, त्यसपछि विस्तारै एकअर्काका विचारहरु जुध्न थाल्छन् ।
वैवाहिक सम्वन्धमा धेरैले एकअर्काको भावनाको कदर गर्दै , एकले अर्काको विचारलाई सम्मान गर्दै आफुलाई परिवर्तन गर्दै लैजान्छन् भने कोही आफ्नो विचारमा टसमस गर्न रुचाउदैनन् ।श्रीमानले यसो नगर उसो नगर भन्दा त्यसलाई आफुलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भनेर नकारात्मक सोच बनाइहाल्ने र श्रीमानले पनि महिला भनेको घरभित्रै बस्नुपर्छ, बाहिर गए भने बिग्रन सक्छन् भन्ने आशंकामा जतिबेला पनि कता हो, के हो भनेर केरकार गरिरहने गर्दा दुबैजनाको मन विस्तारै टुट्दै जान थाल्छ ।सम्वन्ध टुट्ने धेरै कारणहरु हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा सम्वन्ध मिलाउनुभन्दा तोड्नु नै दुबैका लागि हितकर देखिन्छ ।
तर, मैले यहाँ यस्ता दुईजोडीसँगको कुरालाई मात्र राखें, जहाँ एकअर्कावीचमा ठूलो मतभेद नहुँदा पनि र एकअर्कालाई माया गर्दागर्दै पनि सम्वन्ध विच्छेद हुने अवस्था निम्तिएको छ । यी जोडी न त सम्वन्धमा रहँदा खुशी भए, न त अहिले एकअर्कासँग छुटिएर नै खुशी हुन सकेका छन् ।कुनै पनि सम्बन्धलाई टिकाउने महत्वपुर्ण आधार भनेकै विश्वास र सम्मान हो ।त्यसैले एकअर्काप्रतिको विश्वासलाई कायम राख्नका लागि दुवैपक्षले एकअर्काको भावनालाई बुझेर, त्यसको सकेजति सम्मान गरेर अगाडि बढेको खण्डमा यसरी ए कअर्कामा माया हुँदाहुँदै सम्बन्धलाई तोड्नुपर्ने बाध्यता आउने थिएन होला । पत्रकारिता गरिरहेका मेरा अरु साथीहरू जसका श्रीमान श्रीमती दुबैजनासंग म नजिक छु र उनीहरुवीच पनि यस्तै समस्याहरु रहेको गुनासो समय-समयमा मैले सुन्ने गरेकी छु । कतिपयको त सम्बन्ध विच्छेद भएका खबर आउने गरेका छन् ।ती साथीहरुलाई यही लेखमार्फत म एकमुष्ट सुझाव दिन चाहान्छु कि एकअर्काको भावनालाई सम्मान गरेर दुवैपक्षले विश्वासको वातावरणलाई कायम राख्ने प्रयास गर्दै आफ्नो पारिवारिक जिन्दगीलाई अगाडि बढाउनुहोस् ।तपाईको घर नै तपाईलाई स्वर्गीय आनन्द दिने मन्दिर हुनेछ । अनि तपाईको जोडी मुना र मदनको जस्तै प्रेममय जोडी बन्नेछ ।